इम्बोस्ड नम्बर प्लेट किन ल्याइयो ?
यातायात व्यवस्था विभागले साउन १ गतेदेखि बागमती र गण्डकी प्रदेशका सबै सवारी साधनमा अनिवार्य इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नुपर्ने सूचना निकालेको छ । विभागको सूचनापछि पूर्वाधारविना इम्बोस्ड राख्न भनिएको भन्दै यसको विरोध भइरहेको छ । कतिपयलाई इम्बोस्ड नम्बर के हो ? यो किन जडान गर्नुपर्छ भन्ने समेत प्रस्ट छैन । जडान कहाँ गर्ने र कसरी गर्ने भन्ने नै थाहा नभएको वेला विभागले भने इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान नगरे कारवाही गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
नेपालमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न थालिएको पाँच वर्ष भयो । २०७४ सालको भदौदेखि सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न शुरू गरिएको हो । सरकारको लक्ष्य अनुसार अहिलेसम्म २५ लाख सवारीमा जडान गर्ने भनिए पनि हालसम्म जम्मा २५ हजारको हाराहारीमा मात्र जडान भएको विभागको तथ्यांकले देखाउँछ ।
इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानका लागि ४ अर्ब बढी लागतमा अमेरिकी र बंगलादेशी संयुक्त कम्पनी डेकाटुर टाइगर आइटी कम्पनीसँग पाँच वर्षे सम्झौत गरिएको थियो । यो सम्झौता सकिएपछि फेरि त्यही कम्पनीसँग नवीकरण गरिएको छ ।
के हो इम्बोस्ड नम्बर ?
यो एक प्रकारको डिजिटल नम्बर प्लेट हो । यसमा ‘सिंगल स्क्रोल लक’ प्रणाली जडान हुन्छ । प्लेटमा एउटा चिप्ससहितको स्टिकर हुन्छ । त्यो स्टिकरलाई आरएफआईडी भनिन्छ । आरएफआईडी भनेको रेडियो फ्रिक्वेन्सी आइडेन्टिफिकेसन हो । यसमा सवारी धनीको विवरणसहित सवारी साधनको विवरण राखिएको हुन्छ । जस्तै; कहाँ बनेको, इन्जिन नम्बर, सवारीले कर तिरेको मिति, ठाउँ आदि ।
इम्बोस्ड नम्बर जडान उपत्यकाका तीन ठाउँबाट गर्न सकिन्छ । जसमा दुई पांग्रेले यातायात व्यवस्था कार्यालय गुर्जुधारा; साना तथा मझौला तीन र चार पांग्रेले सवारी परीक्षण कार्यालय, टेकु; ठूला सवारीले यातायात व्यवस्था कार्यालय, एकान्तकुना र सरकारी सवारी साधनले यातायात व्यवस्था विभाग, मीनभवनमा गएर जडान गर्नु पर्छ ।
यसले सवारी साधनको नियमन गर्छ । आधुनिक प्रविधिको प्रयोगमार्फत सवारीको नियमन गर्ने प्रणाली नै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट हो भन्न सकिन्छ । यो नम्बर प्लेटको रङ सवारीको प्रकार अनुसार फरक फरक हुन्छ । निजी सवारीमा सेतो प्लेटमा कालो अक्षर, सार्वजनिक सवारीमा पहेंलो प्लेटमा कालो, सरकारीमा सेतो प्लेटमा रातो र कूटनीतिक नियोगको सवारीमा सेतो प्लेटमा निलो अक्षर हुन्छ । प्लेटको माथिपट्टिको भागमा प्रदेशको नाम र संकेत लेखिएको हुन्छ भने त्यसको मुनिपट्टि लट जनाउने गरी अंग्रेजी अल्फाबेट राखिएको हुन्छ । प्रदेशको नाम पनि अंग्रेजीमै लेखिएको हुन्छ ।
कहाँ गएर जोड्ने ?
इम्बोस्ड नम्बर जडान उपत्यकाका तीन ठाउँबाट गर्न सकिन्छ । जसमा दुई पांग्रे सवारीले यातायात व्यवस्था कार्यालय गुर्जुधारामा गएर जडान गर्न सक्नेछन् भने साना तथा मझौला तीन र चार पांग्रे सवारी साधनले सवारी परीक्षण कार्यालय, टेकुमा गएर जडान गर्न सक्नेछन् । यस्तै; ठूला सवारीका लागि यातायात व्यवस्था कार्यालय, एकान्तकुना र सरकारी सवारी साधनका लागि यातायात व्यवस्था विभाग, मीनभवनमा जडान स्थल तोकिएको छ ।
किन राख्ने इम्बोस्ड नम्बर प्लेट ?
इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गरिसकेपछि बीचमा झिक्न वा फेर्न मिल्दैन । जसले गर्दा सवारी साधन चोरीका घटनामा न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । अर्को भनेको कर नतिरेका सवारी र सवारी धनीको पहिचान सजिलै गर्न सकिन्छ । नम्बर प्लेटमै रेकर्ड राखिने हुँदा कर नतिरी चलेका सवारीलाई ठाउँको ठाउँ नियन्त्रणमा लिन सकिन्छ । इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा रेडियो फ्रिक्वेन्सी आइडेन्टिफिकेसन भन्ने नम्बर हुन्छ । यो नम्बरले कुन सवारी, कति नम्बरको सवारी कहाँ छ र कस्तो अवस्थामा छ भनेर सजिलै पत्ता लगाउन सकिन्छ ।
जडान शुल्क कति लाग्छ ?
इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न दुई पांग्रे, तीन पांग्रे र चार पांग्रे सवारी साधनका लागि फरक–फरक शुल्क तोकिएको छ । दुई पांग्रेको लागि दुई हजार पाँच सय, तीन पांग्रेको लागि दुई हजार नौ सय, चार पांग्रे मझौला सवारीका लागि तीन हजार दुई सय र हेभी सवारीको लागि तीन हजार ६ सय रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ ।
इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गरिसकेपछि बीचमा झिक्न वा फेर्न मिल्दैन । जसले गर्दा सवारी साधन चोरीका घटनामा न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ।
आरएफआईडी स्टेसन दश ठाउँमा
इम्बोस्ड नम्बर प्लेट कार्यान्वयनका लागि सरकारले दश ठाउँमा आरएफआईडी स्टेसन राखेको छ । स्टेसनले सवारी साधनमा प्रयोग भएको आरएफआईडीलाई ट्र्याक गर्छ । स्टेसनमा ट्र्याक भएको सवारी साधनको विवरण विभाग र ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले कार्यकक्षमा बसेर हेर्न सक्छ । यसबाट कुन सवारी कहाँ प्रवेश गर्‍यो भन्ने सजिलै थाहा हुन्छ । यसका लागि उपत्यका छिर्ने प्रमुख पाँच नाका नागढुंगा, फर्पिङ, जोरपाटी, जगाती र नागार्जुनमा स्टेसन बनाइएको छ । उपत्यका बाहिर बुटवल, इटहरी, पथलैया, अत्तरिया र कोहलपुरमा आरएफआईडी स्टेसन राखिएको छ ।
साउन १ गतेदेखि यस्ता सवारीले इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्नुपर्छ
नमराज घिमिरे, महानिर्देशक, यातायात व्यवस्था विभाग
जसरी अहिले बागमती र गण्डकी प्रदेशका सबै सवारी साधनलाई इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्यको कुरा आएको छ त्यसो होइन । हामीले २५ लाख सवारी साधन एक महिनामा दर्ता गर्ने भनेको होइन । यो २०७८ सालको कात्तिक महिनामा राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाको फलोअफ हो । यो सूचना अनुसार मंसीर १ गतेबाट नयाँ दर्ता हुने सवारी साधनमा अनिवार्य, फागुन १ गतेबाट नामसारी हुने सवारी साधनमा अनिवार्य र २०७९ जेठ १ गतेबाट नवीकरण गर्ने सवारी साधनमा अनिवार्य भनिएको थियो ।
त्यो अनुसार अब साउन १ गतेबाट मंसीरदेखि यता दर्ता भएका सवारी साधनमा इम्बेस्ड नम्बर राख्ने भनेको हो । बाँकी १४/१५ महिना जति बाँकी छ, त्यसमा पनि यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूले लट अनुसार एउटा कार्ययोजना बनाएर नम्बर प्लेट जडान गर्ने हो । यो भनेको साउन १ गतेबाट सडकमा निस्केका सबै सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर हुनुपर्छ भन्ने अर्थमा बुझ्नु भएन ।
नयाँ दर्ता हुनेहरूले अनिवार्य गर्नैपर्‍यो । पहिल्यै दर्ता भइसकेकाहरूलाई क्रमिक रूपमा यातायात व्यवस्था कार्यालयले फेरि कार्यतालिका निकाल्छ र त्यो कार्यतालिका अनुसार आगामी १५ महिनाभित्र २५ लाख सवारी साधनमा जडान गर्ने हो । अहिले नेपालमा ४० लाख सवारी साधन दर्ता छन् । ती सबैले एकै दिनमा जडान गरिसक्नुपर्छ भनिएको होइन ।
इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न दुई पांग्रे, तीन पांग्रे, चार पांग्रे मझौला र हेभी सवारी साधनका लागि क्रमशः दुई हजार पाँच सय, दुई हजार नौ सय, तीन हजार दुई सय र तीन हजार ६ सय रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ ।
मंसीर १ गते यता नयाँ दर्ता भएका सवारी साधनले साउन १ गतेसम्म अनिवार्य जडान गर्नै पर्छ । यसको लागि बागमती र गण्डकी प्रदेशमा पूर्वाधार तयार भइसकेको छ । लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि गर्नुपर्छ । मधेश प्रदेशको चाहिं कात्तिकको सूचना आउँदा नाम नटुंगिएकोले अहिले बनेको छैन ।
बागमती र गण्डकी प्रदेशमा मंसीर १ गतेबाट दर्ता भएका सवारीलाई पुग्ने गरी प्लेटहरू बनाएका छौं । यसका लागि नम्बर प्लेट जडान गर्ने सबै पूर्वाधार तयार भइसकेको छ । आवश्यक पर्ने सबै स्रोतसाधन पनि पर्याप्त मात्रामा छ । आरएफआईडी गेटभन्दा बाहेकका सबै इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार छन् ।
अहिले नागरिकले के गलत बुझेको पाइयो भने, आरएफआईडी गेटलाई अनिवार्य शर्तको रूपमा बुझेको पाएँ । तर, यो इम्बोस्ड प्लेट नम्बरको सप्लिमेन्ट्री डिभाइस मात्र हो । यसले इम्बोस्ड नम्बर भएका सवारी साधनलाई काउन्ट गर्ने मात्र हो । जस्तै; अहिले उपत्यका भित्रिने र बाहिरिने सवारीलाई थानकोटमा प्रहरीले काउन्ट गर्छ । यो गेट राख्यो भने काउण्ट गर्ने काम त्यो गेटले काम गर्छ, प्रहरीले गर्नु पर्दैन ।
आरएफआईडी गेट भनेको इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको नेसेसरी डिभाइस नभई सप्लिमेन्ट्री डिभाइस हो । यसमा जिपीएस लोकेशनभन्दा बाहेक अन्य सबै सूचना अहिलेको रेडियो फ्रिक्वेन्सी स्टीकर अथवा सवारी साधनमा लगाएको चिप्समा हुन्छ र आरएफआईडी गेटबाट क्रस हुनेबित्तिकै सबै सूचना सहितको विवरण सेन्टर सर्भरमा आउँछ ।
प्रकाशित: Thursday, June 09, 2022 | 08:00:00 बिहीबार, २६ जेठ, २०७९